मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइँदैन ? उल्लंघन गरे जरिवाना « Himal Post | Online News Revolution
प्रकाशित मिति : २०७४, १२ असार ०८:४०
१४ असारमा हुने स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि आइतबार राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु भएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार मौन समयभित्र राजनीतिक दल तथा दलका उम्मेदवारहरूसमेतलाई निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसारजन्य कुनै पनि किसिमका क्रियाकलाप गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज छ । खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।